Imandarmedia.com.np: को बन्छ नेपाल आइडल ? – नेपाली ‘गुगल ब्वाई’ आदित्यले गरे सनसनीपूर्ण भविष्यवाणी…
Main News, News » को बन्छ नेपाल आइडल ? – नेपाली ‘गुगल ब्वाई’ आदित्यले गरे सनसनीपूर्ण भविष्यवाणी…
को बन्छ नेपाल आइडल ? – नेपाली ‘गुगल ब्वाई’ आदित्यले गरे सनसनीपूर्ण भविष्यवाणी…
नेपाली गुगल ब्वाई भनेर चिनिने बालक आदित्य दाहालले फेरी अर्को सनसनीपूर्ण भविश्यव णी गरेका छन ।
अन्तराष्ट्रिय फ्रेंजाईज शो ‘नेपाल आइडल’ को फाइनल हुनै लाग्दा दाहालले यस्तो भविष्यवाणी गरे पछी उनको पुन: चर्चा हुन थालेको छ । उनले ‘नेपाल आइडलको बिजेता निशान भट्टराई हुन्छ’ भनेर कपिमा लेखेर आफ्नो भविष्यवाणी गरेका हुन् ।
नेपाल आइडल नेपाली रियालिटी शो मध्य कै सबै भन्दा ठुलो पुरष्कार राशिको शो हो । बिजेताले २० लाख रुपैयाको साथमा महिन्द्र केयुभी १०० कार पनि प्राप्त गर्ने छ । बिजेताले मात्र हैन फस्ट रनर अपले १५ लाख रुपैया र सेकेन्ड रनरअपले पनि १० लाख रुपैया पुरष्कार राशि प्राप्त गर्ने छ ।
हजारौ प्रतिष्पर्धीलाई पाखा लगाउदै अहिले टप ४ मा आइ पुगेका प्रतिष्पर्धीहरु हुन् – सागर आले, निशान भट्टराइ, बुद्द लामा र प्रताप दास । आदित्य दाहालको भविश्यवाणी सहि होला या नहोला त्यो त भविष्यले नै बताउला तर तपाइँ भने प्रतिभाशालीलाई आइडल बनाउन भोट गर्नु होला ।
झापाका शेषराज र ईश्वरा दाहालका छोरा हुन आदित्य । २०६७ मा जन्मेका उनी अहिले ७ बर्षका भए। बोल्न, हिँडडुल गर्न नसक्ने दाहालले लिखित रूपमा अद्भुत खालका धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । विद्यालय नगएका र अक्षरसमेत नचिनेका दाहालले एकाएक गम्भीर विषयलाई लिखित रूपमा अभिव्यक्ति गर्न थालेपछि दाहाल चर्चामा छन् । झन्डै चार वर्षको उमेरमा उनको यस्तो प्रतिभा प्रस्फुटन भएको थियो । त्यसपछि उनका धेरै अनुयायी बन्दै गएका छन् । त्यसमध्ये धेरै नेताहरूसमेत बालक दाहालको क्षमताबाट प्रभावित छन् ।